Ma jirto cid Arna matasha oo qurbaha joogta” Guddoomiyaha ARNA. « SAWNEWS NETWORK
Somalia: Puntland Minister slammed for releasing “copied” report from Somaliland - Garowe Online December 2, 2016In Somalia, better education alone is not enough to challenge extremism - Devex December 2, 2016Somaliland Diaspora. The need for a meritocratic benchmark of education and experience - SomalilandPress November 29, 2016Somalia: Parliamentary elections for Banadir region, Somaliland to kick start in Mogadishu - Garowe Online November 30, 2016
Cuba's Fidel Castro, revolutionary and dictator, seen by some in Colombia as a peacemaker - CBC.ca December 2, 2016Canadian couple among 13 killed in Tennessee wildfires - CBC.ca December 2, 2016ISIS to step up attacks on Europe, report warns - CTV News December 2, 2016Italy Vote May Not Be So Scary After All - Forbes December 2, 2016Bullying, barriers, exclusion often part of the curriculum for students with disabilities - Edmonton Journal December 2, 2016Politics South Korea to hold Park impeachment vote in parliament Add to ... - The Globe and Mail December 2, 2016
« Xoghayaha Guud Ee Xisbiga UDUB Oo Gabiley U yimid Xaflad lagu soo dhawanayo Gudoomiyihii Ucid ee Gabilay iyo tageerayaal u diga rogtay UDUB
Deeq lacageed oo ka timid jaaliyadda Haweenka reer Awdal ee Degan Minisota Maraykanka, Oo ay ugu deeqeen Hosbitalka Fistulaha ee Borama “Faadumo Uur-doox” + Sawiro »
Ma jirto cid Arna matasha oo qurbaha joogta” Guddoomiyaha ARNA.
Posted by Sawnews.tk on May 28, 2009
Boorama (Sawnews) – Saxafiyiinta ka howl-gala caasimada Gobalka Awdal ee Borama ayaa maanta ku booqatay xafiiskiisa gudoomiyaha ururka ARNA Md. C/qaadir Aadam Nuur waxana ay la yeelatay waraysi dheer oo taabanayay dhinacyo badan, waraysigaas ayaa u dhacay sidan. Saxaafada: Mud. Gudoomiye nooga waran halka ay marayso hawshii qababqaabada shirka dhinaca teleefanka ah ee ay ARNA la yeelanayso qurbajooga AWDAL iyo SALAL?
Gudoomiyaha ARNA: Waa Alle Mahadii hawl wanaagsan ayaa laqabtay ilaa hada, walaalo badan oo dunida dacaladeeda kala jooga ayaa is diiwaan galiyay waxana aan diyaarsanay warbixino wixii loo baahnaa, hawshuna si fiican ayay noogu socotaa.
Saxaafada: Md. Gudoomiye ilaa hada yaa is diiwaan galiyay oo aan carabka ku dhufan kartaa oo shirkan ka soo qayb galaya?
Gudoomiyaha ARNA: Walaahi waxa aan hubaa in ay ka soo qayb galayaan aqoonyahano waawayn indheer-garad iyo daneeyayaal reer AWDAL iyo SALAL ah, ma jecli in aan hebel iyo hebel idhaa balse waa hubaal in ay ka soo qaybgalayaasha shirku noqon doonaan kuwo fikiro lala dhaco keeni kara.
Saxaafada: Waxa nagu maqaalo ah in ay qurbo joog badani ka biyo diidsan yihiin halka aad hawsha ka bilawdeen iyo qaabka aad u wadaan, markaa idinku taas ma ogtihiin?
Gudoomiyaha ARNA: Waa runtaa oo waan ogahay in ay cabashooyin jiraan, waxa an diyaar u ahay in aan waraysigaygan wax walba ku cadeeyo waxa kale oo aan leeyahay markalena ku celinayaa in aan u baahanahay cid walba oo reer AWDAL iyo SALAL ah oo wada fikir hormareed oo na caawinaysa, waxa kale oon sheegayaa in ARNA ay tahay urur ganacsi oo ay ku midoobeen mutadawaciin dalka gudihiisa jooogta isla markaana ayna ahayn urur siyaasadeed.
Saxaafada: Mud. Gudoomiye wax maka sheegi kartaa AGENDA-yaasha shirka?
Gudoomiyaha ARNA: Maya Ma jecli inaan ka hor dhoco waxase aan hubaa in ay dhamaantood yihiin kuwo khuseeya hormarinta wadooyinka, ma ogolaadoono in uu AGENDA-ha shirku qaloocsamo ama wax kale oo aan danaha iyo hormarinta jidadka ahayn aan kaga hadalno.
Saxaafada: Md. Gudoomiye Shirkan dhinaca teleefanka ah halkee laga hagi doonaa, yaa shir gudoon ka ah waqti intee leeg ayaanu socondoonaa?
Gudoomiyaha ARNA: Farsamo ahaan waxa laga hagi doonaa Seattle WA, waxa shirgudooonku yahay BOORAMA aniga ayaana gudoomin doona, waxa aan ku wadnaana in uu socdo mudo 3 saac ugu yaraan ah
Saxaafada: Mud. Gudoomiye ARNA marka loo yimaad waxa aad awooda isugu gayseen in aaad wadada BOORAMA iyo DILA isku xidha wax ka qabataan sideed u qaabilaysaan Qurbo joog ku kala aragti duwan meesha hawsha wadooyinka laga bilaabayo oo ay qaar aaminsan yihiin in hawsha laga soo bilaabo dhinaca xeebaha, qaar leeyihiin ha laga soo bilaabo dhinaca buuralayda IWM?
Gudoomiyaha ARNA: Waa su’aal muhiim ah waxana ay ila tahay in la gaadhay waqtigii fikirka la midayn lahaa lagana arinsan lahaa sida ku haboon ee hawsha loo wajahayo, ARNA waxa ay la noqotay in ay tan ka bilaabaan, shirkana waxa aan ka sugaynaa in ay ka soo baxaan go’aamo midho-dhal ah oo dadka oo dhan wada qanciya hadii markaa lagu heshiiyo in hawsha cusudeeda dhinac kale laga bilaabo loona hawo tabar iyo taageero anaku diyaar baan u nahay?
Saxaafada: Gudoomiye ARNA ma ledahay cid MATASHA oo u joogta qurbaha hawshan la wada?
Gudoomiyaha ARNA: MAYA MAYA MAYA ma jirto cid ARNA matasha oo qurbaha joogta, hawshan shirka taleefanka ahna waxa nala wada saaxiibo iskood isku xilqaamay oo mahadsan balse ma matalaan mawqifka ARNA ee ku aadan WAAYAHA qurba jooga reer AWDAL, waxa kale oo muhiim ah in la ogaado ARNA waxa ay soo dhowaynaysaa cidwalba iyo ururwalba oo SOMALI ah oo jecel in uu hawlaha aan wadno qayb ka gaysto.
Saxaafada: Gudoomiye maxa la taaban karaa oo aad warbixinadaada shirka aad ka AKHRIYAYSO aad ku soo dari doontaaee ilaa hada ka qabsoomay hormarinta wadooyinka goboladan AWDAL iyo SALAL?
Gudoomiyaha ARNA: Uuuuuuum Walaahi dadaalkayagu ma yara, waxana ay warbixintayadu koobsan doontaa ilaa maalintii aan aasaasnay ARNA ilaa maanta hawshii aan qabanay, waxa aan kaga warami doonaa xidhiidhka ka dhaxeeya ARNA iyo xukuumada S/LAND iyo DJIBOUTI waxa aan sheegi doonaa in bulshada aan u sheegnay inay qax qabsadaan, waxa kale oo aan ka warbixin doonaa qorshayaashayada fog-iyo kuwa dhowba.
Gudoomiyaha uUurka ARNA Md. C/qaadir Aadam Nuur Saxaafada: Gudoomiye qorshayaasha ARNA ma ku jirtaa in ay isbarbartaagto hormarka ay QURBO-joogu ka sameeyeeyeen malgashiga degaanka GEB oo lagu wado mustaqbalka in ay noqoto xarun wayn oo lagu soo hirto isla markaana aad wadadeedii biloowdaan?
Gudoomiyaha ARNA: Haa meesha kama madhna in GEB, Tooraboora iyo taako walba oo goboladan ah aan wax ka qabano, hawsha ayaase kala horaysa, anagu meelwalba oo u baahan wax ka abasho degdeg ah waan ka qabanaynaa, waanan soodhowaynaynaa hormarka ka socda maanta GEB?
Saxaafada: Halkuu Kudambeeyay Gudoomiye meel marinta heshiiskii dayactirka wadooyinka gudaha ahaa ee dhex maray ARNA iyo D/Hoose?
Gudoomiyaha ARNA: Waan qirayaa in dhaqangalkii buuxay ee heshiiskaasi uu wali gaabis yahay, waxase hubaal ah in ARNA ay dhankeedii ka soo baxday balse waxa aan wali wax muuqda qabani waa D/Hoose, waanse u cudurdaarayaa oo waxaan leeyahay way mashquulsan tahay D/hoose ee waa u diyaar in ay heshiiskaas dhankiisa ka fuliso.
Saxaafada: Gudoomiye Adiga CABDDIQAADIR AHAAN mawqifkaaga ku aadan Qurbojoogu waasidee ama dhinacee ayaad inta badan raacsan tahay?
Gudoomiyaha ARNA: Waxay cid walba ka marag kacaysaa in aan hore howlo ula soo qabtay dad badan oo qurba joog ah kuwaasoo ii igmaday inaan howlo muhiim ah la qabto isla markaana aan igu soo xulan qabiil iyo hayb kale. Anigu waxa aan ahay dhexdhexaad, waxa aan ahay muwaadin ay walaalaha dibadu u siman yihiin, waxa aan ahay shaqsiyad soo dhawaynaysa hormarka oo dhan, ma ihi garab iyo koox, waxa intaas ii dheer oo aan u arkaa arintooda mid u baahan oo kaliya in meel la isugu yimaad oolaga wada hadlo iyada oo la dhan yahay.
Saxaafada: Ma waxaad leedahay xidhiidh gaar ah lama lihi ururada qaar sida ARDAA, GURMAD iyo IQRA ee qurbaha?
Gudoomiyaha ARNA: Haa waan ku leeyahay ma jirto Urur gaar ah oo aan si ugu xidhanahay mana jiraan shaqsiyaad gaar ah oo aan dan gaar ah wadaagno, anigu waxa aan ahay gudoomiyaha ARNA ee dalka hadii inta la isugu yimaad shir la iisoo jeediyo in aan xilka isaga tago kuna dhaliilmay waxqabadkii waan ka tagayaa waxana aan diyaar u ahay in la iga badalo, waxaan uga socdaa mudada aan xilka hayaa waa kooban tahay hawsha ii taalna way badan tahay wanan ku feejiganahay in aan noqdo mid bulshada u dhexeeya kana dhawrsoon wax badan
Saxaafada:Gudoomiye ugu dambayntii intee inleeg ayaad filaysaa in uu midho dhalo shirkan Sabtidu?
Gudoomiyaha ARNA: 100% aad ayaan ugu kalsoonahay waxana aan leeyahay waa mid guul keeni doona gadii alle idmo.
Abdifitahaam Ahmed Rate this:Like this:Like Loading...
This entry was posted on May 28, 2009 at 5:13 pm	and is filed under News (Warka).